အမျိုးမျိုးသောရောဂါများ၏အန္တရာယ်ကိုညွှန်ပြသောလက်သည်းရောဂါလက္ခဏာများ။ – Noor Health Life
လက်သည်းတွေက သင့်ကျန်းမာရေးကို အများကြီးပြောပြနိုင်တယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား။
ဟုတ်တယ်၊ ယုံရခက်ပေမယ့် ဆရာဝန်တွေက သင့်လက်သည်းတွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သင့်ကျန်းမာရေးအကြောင်း အများကြီးပြောပြနိုင်ပါတယ်။
စကားမစပ်၊ လက်သည်းများသည် အသက်အရွယ်အလိုက် ပြောင်းလဲတတ်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် ရုတ်တရက်ဖြစ်ပြီး အလွန်သိသာလာပါက ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
လက်သည်းခြေသည်းတွေမှာ ဘာကြောင့် အဖြူရောင်အစက်တွေရှိနေတာလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါများသည် လက်သည်းများတွင် ပေါ်နေသော လက္ခဏာများဖြစ်ပြီး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်ရယူရန် လိုအပ်ပါသည်။
လက်သည်းဆိုးဆေး အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းသည် အမျိုးသမီးများတွင် လက်သည်းအရောင်ပြောင်းသွားတတ်သည်။သို့သော်လည်း အမျိုးသားများသည် ဤမိတ်ကပ်ပစ္စည်းကို မသုံးကြဘဲ လက်သည်းအရောင် ရုတ်တရက် အဝါရောင်ပြောင်းသွားပါက အဆုတ် သို့မဟုတ် ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာဖြစ်နိုင်သည်။ တစ်သျှူးပြဿနာများ။
လက်သည်းအပေါ်ပိုင်းမှာ ဖြူသွားရင်တော့ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုပါ။သို့သော် အခြားရောဂါတစ်ခုခုနဲ့ ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ ပြဿနာတစ်ခုခုရှိနေရင် ဒီလက်သည်းဖြူတွေဟာ ကျောက်ကပ်၊ အသည်း ဒါမှမဟုတ် ကျောက်ကပ်ရဲ့ လက္ခဏာဖြစ်နိုင်တာကြောင့် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ နှလုံးရောဂါ.ဖြစ်ကြပါတယ်။
လူတွေက ဘာလို့ လက်သည်းတွေဝါးနေတာလဲ။
အညိုရောင် သို့မဟုတ် အနက်ရောင်မျဉ်း
လက်သည်း မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ အညိုရောင် သို့မဟုတ် အနက်ရောင် အစင်းကြောင်းများ ပေါ်လာခြင်းသည် အရေပြားကင်ဆာ အပါအဝင် အမျိုးမျိုးသော အရေပြားပြဿနာများကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် ဤကိစ္စရပ်တွင် တိကျသော ရောဂါရှာဖွေနိုင်စေရန် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
လက်သည်းများ အရေပြားမှ စတင်ထွက်ပါက Thai Ryde’s disease၊ glandular disease သို့မဟုတ် အခြားသော autoimmune ရောဂါများကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါသည်။
လက်သည်းတွေက ဇွန်းလို အထက်ကိုကွေးနေတယ်ဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ သံဓာတ်ချို့တဲ့တာကြောင့် ဖြစ်နိုင်တယ်။
လက်သည်းကျန်းမာရေးသည် သတင်းအချက်အလတ်မရှိခြင်းကြောင့် လျစ်လျူရှုခြင်း သို့မဟုတ် လျစ်လျူရှုခြင်းခံရသော လူ့ကျန်းမာရေးအကြောင်း များစွာပြောထားသော်လည်း သင့်လက်သည်းတွင် အောက်ပါလက္ခဏာ ၅ ချက်ပေါ်လာပါက သင်စိုးရိမ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ အဆိုအရ လက်သည်းတွေ ကျိုးလွယ်ပြီး ပါးလွှာတာက အဆန်းမဟုတ်ပေမယ့် ဒါဟာ သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် အရေးကြီးတဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုပါ။
ဒါကတော့ သင့်လက်သည်းတစ်ခုလုံးရဲ့ ကျန်းမာရေးအကြောင်း ပြောပြဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ လက္ခဏာ ၅ ခုပါပဲ။
သင့်လက်သည်းများ ကျိုးလွယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပါးလွှာပါက လူတစ်ဦးရှိ သိုင်းရွိုက်ဂလင်းသည် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်မလုပ်ကြောင်း ညွှန်ပြနေပါသည်။ လိုအပ်သောပမာဏကို အချိန်မီ ထုတ်မပေးနိုင်ပါ။
လက်သည်းများ ထူထဲသော်လည်း အလွယ်တကူ ကြွပ်ဆတ် သို့မဟုတ် ကြမ်းတမ်းပါက၊ ခန္ဓာကိုယ်က လိုအပ်သော ဟော်မုန်းပမာဏထက် ပိုထုတ်လွှတ်နေခြင်း သို့မဟုတ် ဗီတာမင် A, C နှင့် biotin ချို့တဲ့နေခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
လက်သည်းထိပ်ဆီသို့ အချွန်များထွက်ပြီး ဝိုင်းစက်နေသော မျက်နှာပြင်ကို ‘clubbing’ ဟုခေါ်သည်၊ သင်းဖွဲ့ခြင်းသည် အဆုတ်၏လုပ်ဆောင်မှု အားနည်းခြင်း၏ လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပြီး သင့်အဆုတ်သည် လိုအပ်သော အောက်ဆီဂျင်ပမာဏကို မရရှိတော့ဘဲ သင့်သွေးများ လုံလောက်စွာ မရရှိခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ အောက်ဆီဂျင်ကုန်နေတယ်။
သင့်တွင် psoriasis ဖြစ်နိုင်သည်။
Psoriasis သည် လူ့ဆဲလ်များ ကြီးထွားမှု 10 ဆတိုးလာကာ အရေပြားရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ဤရောဂါသည် လက်သည်းများတွင်လည်း ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ဤရောဂါသည် ကိုယ်ခံအားစနစ် အားနည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ဤအခြေအနေတွင် လက်သည်းများသည် ထူထဲ၍ ကြမ်းတမ်းလာပြီး ဖြူလာပါသည်။ ဒီရောဂါလက္ခဏာမှာလည်း နာကျင်ပါတယ်။
အရက်သောက်သုံးသူများသည် အသည်း၏အရွယ်အစားကို မသင့်လျော်သည့်အရွယ်အစားအထိ တိုးမြင့်လာစေသည့် ပထမဆုံးအသည်းရောဂါဖြစ်နိုင်ချေပိုများသည်။ ထောက်ပြသည်။
ကျန်းမာရေး အစီရင်ခံစာအရ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူများ၏ 68% သည် အသည်းရောဂါရှိနေသည်။အရက်ကို အသုံးမပြုဘဲ ထိုလက္ခဏာများရှိနေသေးပါက သင့်ဆရာဝန်နှင့် ချက်ချင်းပြသပါ။
လက်သည်းခြေသည်းတွေမှာ ဆီးချိုရောဂါလက္ခဏာတွေတွေ့နိုင်ပြီး ဆေးစစ်ချက်မခံယူခင် လက်သည်းနဲ့စစ်ဆေးနိုင်သလို လက်သည်းတွေအဝါရောင်ပြောင်းသွားပါက လက်သည်းခြေသည်းတွေမှာ သွေးတွင်းသကြားဓာတ်များတဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပြီး လက်သည်းခြေသည်းတွေမှာ အနီရောင်ဖြစ်နေပါက၊ ဆီးချိုရောဂါ စတင်ခြင်း၏ လက္ခဏာတစ်ရပ်။လက်သည်းပေါ်တွင် မှိုပိုးဝင်ခြင်း၏ လက္ခဏာများ ကုသမှုနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ။
onchocerciasis လို့လည်း ခေါ်တဲ့ ဒီရောဂါဟာ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို အဓိက သက်ရောက်ပါတယ်။ မှို၊ မှိုစသည်တို့ကဲ့သို့ လက်သည်းများကို ထိခိုက်စေနိုင်သော မှိုအမျိုးအစားများစွာရှိသော်လည်း အဖြစ်များဆုံးသော အနာမှာ dermatophyte ဖြစ်ပြီး ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း၏ အဖြစ်အများဆုံး အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ဤလက်သည်းပိုးဝင်သူများသည် လက်သည်းအောက်တွင် အဖြူနှင့်အဝါအစက်အပြောက်များ ပေါ်လာပြီး မကုသပါက လက်သည်းတစ်ခုလုံးကို ဆုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး လက်သည်းများကို မာကျောစေကာ ကျွတ်ထွက်စေသည်။
လက္ခဏာများတွင် ခံတွင်းနံ့ဆိုးခြင်း၊ မာကျောပြီး ကြွပ်ဆတ်သော လက်သည်းများနှင့် လက်သည်းများ အဝါရောင် သို့မဟုတ် အညိုရောင်များ ပါဝင်သည်။ စိုးရိမ်သောကအကြောင်းရင်းများတွင် ကိုယ်ခံစွမ်းအားမရှိခြင်း၊ အသက်ကြီးလာခြင်း၊ ချွေးအလွန်အကျွံထွက်ခြင်း၊ လက်သည်းပိုးဝင်ခြင်းနှင့် ညစ်ပတ်သောနေရာတွင် ခြေဗလာလမ်းလျှောက်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ဆီးချိုရောဂါရှိသူများတွင် ခြေထောက်များသို့ သွေးစီးဆင်းမှု အားနည်းခြင်းသည် ရောဂါဖြစ်စေသည့် အဓိကအကြောင်းအရင်းဖြစ်သည်။ ကုသမှုတွင် အလွယ်တကူရနိုင်သော ဆေးဝါးများမှ ဆေးစာအထိ ရွေးချယ်စရာများ အားလုံးရှိသည်။
. လက်နှင့်ခြေကို ပုံမှန်ဆေးကြောသန့်စင်ပါ။
. လက်သည်းများကို ကောင်းမွန်စွာ ညှပ်ထားသင့်ပြီး ကောက်နေသောထောင့်များကို ရှောင်ရှားသင့်သည်။
. လက်သည်းဆိုးဆေးကို သေချာသန့်စင်ပေးသင့်ပါတယ်။
. အပိတ်ဖိနပ်များ ဝတ်ဆင်ထားချိန်တွင် ခြေအိတ်များ ဝတ်ဆင်ရပါမည်။
. လက်သည်းများကို အလှပြင်ဆိုင် သို့မဟုတ် အလှပြင်ဆိုင်တွင် ကုသပါက ကိရိယာအားလုံး သန့်ရှင်းကြောင်း သေချာပါစေ။ နောက်ထပ်မေးခွန်းများနှင့် အဖြေများရရှိရန် Noor Health Life သို့ အီးမေးလ်ပို့ပါ။ noormedlife@gmail.com